88 students – democracy for burma
Tag: 88 students
On November 28, 2014 November 29, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Latest reports from family members of other activists detained with Hla Myo Naung indicate that he is at serious risk of going blind due to lack of treatment in detention for his eye condition. “Ko Hla Myo Naung is going to completely lose his vision. He had already gone blind in one eye due toalack of treatment and now his other eye is getting worse and worse,” said Ko Aung Aung Tun, brother of 88 Generation Student leader Ko Ko Kyi, to the Democratic Voice of Burma on 25 April 2008. Continue reading “#BURMA #MYANMAR #88 #GENERATION #Leader #KO #Hla #Myo #Naung #passed #away” →
88 FARMERS AFFAIR : ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း) လယ်ယာစီးပွားနှင့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာဌာန
On October 19, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)
သတင်းမီဒီယာများနှင့် တောင်သူလယ်သမားအရေး စိတ်ဝင်စားသူများသို့ –
၈၈ မျိုးဆက် ( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း) လယ်ယာစီးပွားနှင့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာ ဌာနမှ “တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ” နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကောင်း၊ ဖမ်းဆီးခံနေကြရသော အမှုရင်ဆိုင်နေကြရသော တောင်သူလယ်သမားများနှင့် တောင်သူလယ်သမား အရေးဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့် နေ့ရက် – ၁၈-၁၀-၂၀၁၃ (သောကြာနေ့)။
ကျင်းပမည့် အချိန် – နေ့လည် ၁၂ နာရီ။
ကျင်းပမည့် နေရာ – ၈၈ မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးခန်း။
အမှတ် ၁၀၃၉၊ ၁၀၄၀၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပတ် – ၀၁ ၅၆၅ ၉၁၉။
ဆက်သွယ်ရန် – ဦးထွန်းမြင့်အောင်၊ ဖုန်းနံပတ် – ၀၉၄၉ ၃၀၃ ၁၁၉။
ဦးမျိုးသန့်၊ ဖုန်းနံပတ် – ၀၉၄ ၃၁၃ ၇၁၅၆။
အီးမေးလ် – 88farmeraffairs@gmail.com
After 13 years Min Ko Naing received in person Homo Homini Award
On October 5, 2013 October 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Prague, October 4, 2013 – Min Ko Naing, the leading Burmese democracy activist from the 88 Generation Student Group, ex-post recieved the Homo Homini Award in Prague.
For his outstanding courage and effort he demonstrated during his political activism and struggle for democracy in Burma, Min Ko Naing was originally awarded in 2000, but due to his long term imprisonment he never had the opportunity to personally receive the award.
„When I received the Award in 2000 it was my eleventh year in the jail and I felt like to be forgotten. Homo Homini was light that showed me it was not true,“ said Min Ko Naing during the Homo Homini ceremony the 3rd October 2013 in Prague.
“It was Václav Havel who proved that the true love to humanity cannot be limited by nationalism, religion or discrimination. Me and Václav Havel, we were not close friends, we lived ten thousands kilometers far from each other. But under the roof of freedom, peace and human rights we were like family,” said Min Ko Naing.
The Award Ceremony included film screening ‘Burmese prisoners’, recitation of the Czech translation of Min Ko Naing’s poem and discussion with public about social and political developments in Burma. Continue reading “After 13 years Min Ko Naing received in person Homo Homini Award” →
On September 15, 2013 September 15, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ယနေ့ပြုလုပ်သော ၈ လေးလုံးငွေရတုပွဲမှာ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း
On August 6, 2013 August 7, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma2 Comments
Documents Collection ABSDF North Case-Killing Comrades(Spycase)
The Lady is Cho Cho Kyaw Nyein . Her son was one of the victim and she is telling naing aung that he should take the responsibility what he did.သိုး ထိန်း
စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုပီးသတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ကမောင်မောင်ကြွယ်က ငါ့မွေးစားသား ဒီကိစ္စမင်းတာဝန်ယူရမယ်လို့ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက ABSDF ဥက္ကဌဟောင်းဒေါက်တာနိုင်အောင်ကိုပြောနေတာပါ မင်းမှာကလေးရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ ဘွားတော်ကမင်းတနေ့ဝဋ်လည်မယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ပြုလုပ်သော ၈ လေးလုံးငွေရတုပွဲမှာ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက သူ့မွေးစားသား အ.က.သ က ကိုမောင်မောင်ကြွယ် ကို ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်မှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးကျောင်းသားအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သပ်လို့ပြောဆိုနေတာကို မှတ်တမ်းရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် လူ၄၀ လောက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲကို ဒေါက်တာနိုင်အောင်က သတ်ခံရသူတွေဟာထောက်လှမ်းရေးတွေအမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူတာဝန်ယူကြောင်းကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဟာ ABSDF မြောက်ပိုင်းဥက္ကဌဟောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရမှုအတွက်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့မိခင်က လူသတ်မှုဖွင့်ထားတာကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပေမယ့်ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးနိုင်ငံပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး အကြောင်းအရာတွေက်ိုသင်တန်းတွေမှာပါဝင်ပို့ချဆွေးနွေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် —
—-ယနေ့ပြုလုပ်သော ၈ လေးလုံးငွေရတုပွဲမှာ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက သူ့မွေးစားသား အ.က.သ က ကိုမောင်မောင်ကြွယ် ကို ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်မှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးကျောင်းသားအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သပ်လို့ပြောဆိုနေတာကို မှတ်တမ်းရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် လူ၄၀ လောက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲကို ဒေါက်တာနိုင်အောင်က သတ်ခံရသူတွေဟာထောက်လှမ်းရေးတွေအမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူတာဝန်ယူကြောင်းကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်
ယနေ့ပြုလုပ်သော ၈ လေးလုံးငွေရတုပွဲမှာ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက သူ့မွေးစားသား အ.က.သ က ကိုမောင်မောင်ကြွယ် ကို ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်မှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးကျောင်းသားအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သပ်လို့ပြောဆိုနေတာကို မှတ်တမ်းရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် လူ၄၀ လောက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲကို ဒေါက်တာနိုင်အောင်က သတ်ခံရသူတွေဟာထောက်လှမ်းရေးတွေအမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူတာဝန်ယူကြောင်းကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဟာ ABSDF မြောက်ပိုင်းဥက္ကဌဟောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရမှုအတွက်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့မိခင်က လူသတ်မှုဖွင့်ထားတာကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပေမယ့်ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးနိုင်ငံပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး အကြောင်းအရာတွေက်ိုသင်တန်းတွေမှာပါဝင်ပို့ချဆွေးနွေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
စစ်ထောက်လှမ်းရေးဆိုပီးသတ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော်ကမောင်မောင်ကြွယ်က ငါ့မွေးစားသား ဒီကိစ္စမင်းတာဝန်ယူရမယ်လို့ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက ABSDF ဥက္ကဌဟောင်းဒေါက်တာနိုင်အောင်ကိုပြောနေတာပါ မင်းမှာကလေးရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ ဘွားတော်ကမင်းတနေ့ဝဋ်လည်မယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ပြုလုပ်သော ၈ လေးလုံးငွေရတုပွဲမှာ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်ကို ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းက သူ့မွေးစားသား အ.က.သ က ကိုမောင်မောင်ကြွယ် ကို ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်မှာစစ်ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲပြီးကျောင်းသားအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သပ်လို့ပြောဆိုနေတာကို မှတ်တမ်းရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် လူ၄၀ လောက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သတ်ဖြတ်ပွဲကို ဒေါက်တာနိုင်အောင်က သတ်ခံရသူတွေဟာထောက်လှမ်းရေးတွေအမှန်ဖြစ်ကြောင်းသူတာဝန်ယူကြောင်းကမ္ဘာကိုကြေငြာခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ဟာ ABSDF မြောက်ပိုင်းဥက္ကဌဟောင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရမှုအတွက်ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့မိခင်က လူသတ်မှုဖွင့်ထားတာကိုခံထားရသူလည်းဖြစ်ပေမယ့်ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားသွားလာနေပြီးနိုင်ငံပြုပြင်တည်ဆောက်ရေး အကြောင်းအရာတွေက်ိုသင်တန်းတွေမှာပါဝင်ပို့ချဆွေးနွေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်
The Committee requests the democratic forces exiled participants to be informed of any obstacles gettingavisa to attend the 8-8-88 Uprising Silver Jubilee
On July 15, 2013 July 15, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
The 8888 Silver Jubilee Convening Committee would like to inform the people from democratic forces, living in various foreign countries and wishing to attend the 8888 Uprising Silver Jubilee, that the Committee will give as much assistance as possible to anyone who possessesapassport or other travelling document; but encountered difficulties to getavisa to attend the 8888 event. In such cases, the Committee asks those concerned to send their personal data to the committee in order to get assistance.
Note: If any American citizen is interested, he or she does not need to apply foravisa as an arrival visa can be given once in the country. However, you have to inform the Committee that you will attend the 8888 Uprising Silver Jubilee. You are also supposed to send us the copy of your passport’s first page. We would thus be able to get involved and solve any problem if facing obstacles at the airport.
Any Burmese citizen, living in another foreign country and wishing to apply foravisa, needs:
1. Brief bio of the applicant
2. Copy of the passport’s first page (the passport has to be issued more than6months ago)
3. Phone number and email address of the Burmese Embassy from the country of residence
4. The stay length in Burma
5.2passport size photos
Note: The Committee can just give assistance for your visa application process to be easier; however, all charges involved to get the visa will be at your expense.
Convening Committee of the 8888 Silver Jubilee
Continue reading “The Committee requests the democratic forces exiled participants to be informed of any obstacles gettingavisa to attend the 8-8-88 Uprising Silver Jubilee” →
On January 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment